Kuwa ugu wanaagsan ee isku xira Awoodda Sare Epoxy Adhesive Invented Cone Anchor Bolt Manufacturer and Factory | Feejignaan
Xirmooyinka Xoogga Sare Epoxy Adhesive Invented Cone Anchor Bolt
Barroosinka koorta rogay ayaa loo isticmaali karaa in lagu xiro qaybo la taaban karo oo derbi ah. Waxay soo saari kartaa saameyn isdaba-joog ah oo la mid ah tan qufulka farsamada ka dib marka koolojiga la adkeeyo marka loo isticmaalo cirbadeynta nooca-cirbadda.
Waxyaabaha: Fasalka 5.8, 8.8 birta kaarboon iyo 304, 316 bir bir birta ah
Daaweynta oogada: qabow galvanized (dhumucda lakabka zinc ≥ 5um);
kulul galvanized (dhumucda lakabka zinc ≥ 45um);
304,316 ahama uma baahna daaweyn dusha sare ah.
Barroosinka koontaroolka rogmada waxaa loo isticmaali karaa barroosinka oo shubka iyo qaybaha dhismaha derbiga dibedda. Waxay soo saari kartaa saameyn isdaba-joog ah oo la mid ah tan qufulka farsamada ka dib marka koolojiga la adkeeyo marka loo isticmaalo cirbadeynta nooca-cirbadda.
Sida laanta kale ee barroosinka kiimikada, barroosinka kiimikada qaabdhismeedka leexsan ayaa leh codsiyo kala duwan, waxaana badanaa loo isticmaalaa isku xidhka u dhexeeya walxaha la taaban karo iyo kuwa ku xidhan mashaariicda dhamaadka sare leh. Gobollada qaar waxay soo saareen sharciyo khuseeya si adag u mamnuucaya adeegsiga barroosinnooyinka kiimikada ee xoogga badan leh ee darbiyada daahyada.
Qaybaha dhejiska ka-dib ee darbiga daahyada dhismaha waa inay ku saleysnaadaan shuruudaha naqshadeynta si loo doorto boodhadhka barroosinka la isku halleyn karo sida gadaal-gooye (ballaadhin) hoos-u-dhigashada farsamo-yaqaanka hoose iyo birta barroosinka kiimikada ee khaldan, iyo qalabka wax lagu xiro ee kiimikada caadiga ah waa looma isticmaali karo. Markaad adeegsanaysid barroosimooyinka 'kiimikada' qaabeysan, alaab-qeybiyaha waa inuu siiyaa warbixinta baaritaanka iska caabinta heerkulka sare ee barroosinka kiimikada.
Waxyaabaha kor ku xusan waa Qodobka 4.6 ee shuruudaha farsamada amniga darbiga ee Zhejiang. Waqti ka dib, gobollo badan iyo ka badan ayaa laga yaabaa inay soo bandhigaan siyaasado khuseeya.
Xaqiiqdii, tallaabooyinka dhismaha ee barxadda kiimikada xoogga sare leh way fududahay, kaliya ku isticmaal tuubada. Barroosinnooyinka koorta rogrogaa waxay u baahan yihiin in lala isticmaalo isku-darka xabagta wax lagu beero ee nooca epoxy-ka ah oo la beddelay. In kabadan kalabar shirkadaha wax soosaarka xabagta ah ee caag sameynta ah ma xalin karaan dhibaatada cirbadeynta nooca xabagta ee dillaaca xabagta, taas oo sababi karta in xabagta labada qaybood ah si isku mid ah loo isku daro oo saameyn ku yeelata waxqabadka isku xirnaanta ee xabagta wax lagu beero. Dabcan, xabagta lafteedu waxay leedahay sifooyin u dhigma. J Waxqabadka xabagta fasalka sidoo kale waa wanaagsan yahay ama xun yahay.
Tallaabooyinka dhismaha ee rooga kiimikada koorta rogaya waa sida soo socota:
(1) Daloollada daloolka dhexroor iyo qoto dheer u dhigma sida ku cad buuga alaabta;
(2) Isticmaal buunshiiliye jilciya si aad u waafajiso godadka oo aad u afuufto kabadan 2 jeer;
(3) Isticmaal burush si aad u nadiifiso siigada dusha godka godka wax ka badan 2 jeer;
(4) Kadib isticmaal qalabka wax lagu afuufiyo si aad ugu afuufo canqowga meesha godku ku yaal ilaa aysan jirin habaas ka soo burqan godka;
(5) Ku dur duriga xabagta beerta ee nooca epoxy ee la beddelay;
(6) Ku dheji nooca rooga ah ee rooga kiimikada.
Hore: Boqortooyada Midowday ee Boqortooyada Midowday ee Isku-xidhka Glu ee Nidaamka Qalajinta Qalajinta 450ml
Xiga: Jiilka-Saddexaad Jiilka Undercut Anchor